WinApps yave kuwanikwa uye inokutendera iwe kumhanyisa Windows kunyorera pane Linux | Linux Vakapindwa muropa
Mumwedzi wekuvhura Hayden matura (mugadziri wekushandisa uye gWSL Injiniya maneja, Windows Subsystem yeLinux paCanonical) yakagovaniswa nenharaunda yeLinux kuburikidza neTweet, nezve iro basa raakange achipa nguva yake "WinApps".
Mune iyo yakagovaniswa tweet isu taigona kuona diki vhidhiyo chidimbu mairi yakaratidzwa maitiro "anenge natively" aunogona kumhanyisa Microsoft Office kunyorera pane yako Ubuntu desktop.
Sezvo zvakaratidzwa yakaratidzika kunge yemaWindows windows mumudziyo kana VM mukati meUbuntu. Zvisinei, hapana ruzivo rwakabuda pamusoro pekuti zvakaitwa sei Ndiri kusava nechokwadi chete kwakasara kwemwedzi yakati wandeiZvakanaka, Hayden Barnes akataura kuti aisazogovera iro basa kuruzhinji kudzamara afunga kudzikama.
Izwi paUbuntu 20.04. Inoshandiswa zvakanyanya pane i5-6300U ine yakangobatanidzwa mifananidzo. Haisi WINE, kure / gore, kana GNOME paWSL. Icho chimwewo chinhu chandinoisa pamwechete. Tevere, ini ndinoronga kuwedzera anoshanda maficha masangano. pic.twitter.com/nGQ8USeR0m
- Hayden Barnes (@unixterminal) April 30, 2020
Panzvimbo pekumirira kuti izvi zviitike, WinApps yakasikwa senzira yakapusa yemirairo yekuisanganisira mafomu anomhanya mukati mechina muchina (kana pane chero dura reRDP) akananga kuGNOME sekunge aive ekuzvishandira.
Zvino, mwedzi mushure mekuziviswa, yakazopedzisira yaziviswa kuruzhinji. zvese chirongwa uye iyo kodhi kodhi inowanikwa pane GitHub, pamwe nemirairo yekushandisa WinApps mune yedu system.
Saizvozvo, zvakakodzera kutaura kuti WinApps yakanga isina kuburitswa uye kugadzikana kweprojekti kwacho hakusi kwakanaka, kunze kweizvozvo ndiko kutanga kweanogona kuve budiriro huru, kunze kwaizvozvo ichiri kutarisirwa kunge chirongwa chaCurtis, inogona kuonekwa semukwikwidzi kune mamwe maturusi ayo anotobvumidza kumhanyisa Windows zvinoshandiswa paLinux, senge Waini.
Uyewo, Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti WinApps inoshanda pasi peVM ine Windows 10 nguva dzese, saka chirongwa ichi chakatosiyana zvachose nezvingatarisirwa (nekuti vazhinji vaizofunga kuti chinoshanda seWine).
Mune yekuchengetera zvinotsanangurwa kuti WinApps inoshanda seinotevera:
WinApps inoshanda na:
Kumhanya neWindows RDP Server muVM Container kumashure
Kutarisa sevha yeRDP yeakaiswa maficha senge Microsoft Office
Kana iwo mapurogiramu akaiswa, gadzira mapfupi anotora mukana weFreeRDP kune ese ari maviri CLI uye iyo GNOME tray
Iwo mafaera mune yako dhairekitori repamba anogona kuwanikwa kuburikidza ne \_\_tsclient\_homekukwira mukati meiyo VM
Iwe unogona zvakare kudzvanya-kurudyi pane chero faira mune yako dhairekitori reimba kuti uzarure neapplication
Parizvino runyorwa rwezvishandiso izvo zvatove zvinoenderana ndizvo zvinotevera:
Pazasi pane inotungamirwa nenharaunda uye nekudaro timu yeWinApp inogona kunge isina kuyedza akawanda maapp.
Parizvino inotsigirwa kunyorera
Internet Explorer 11 (nekuda kwekuti)
Microsoft Kuwana (2016)
Microsoft Kuwana (2019)
Microsoft Kuwana (Hofisi 365)
Microsoft Excel (Hofisi 365)
Microsoft Shoko (2016)
Microsoft Shoko (2019)
Microsoft Shoko (Hofisi 365)
Microsoft OneNote (Hofisi 365)
Microsoft Outlook (Hofisi 365)
Microsoft PowerPoint (Hofisi 365)
Microsoft Muparidzi (2016)
Microsoft Muparidzi (2019)
Microsoft Mupepeti (Hofisi 365)
Nekudaro, kushanda pasi peVM kunogona kunge kwakaodza moyo vazhinji, sezvo zviri nyore kwazvo kushanda pasi peiyo Windows yekuisirwa mumuchina chaiwo.
Asi chinhu chinonakidza nezve chirongwa ndechekuti WinApps inozvigumira pakushanda nezvinhu zvakakosha chete uye inosiya akawanda masevhisi nemaapplication ayo anogona kudya zvakanyanya ndangariro pakombuta. Kunyangwe zvakadaro, chirongwa ichi chakakodzera kuyedzwa nekutariswa.
Maitiro ekuisa WinApps paLinux?
Pakupedzisira, kune avo vanofarira kugona kuyedza chirongwa pane yavo system, ivo vanozokwanisa kushandisa WinApps pane yavo system nekutevera iwo mirairo yakatsanangurwa mune yekuchengetera, iyo iwe yaunogona kuwana kubva pane iyi link iripazasi.
Mune TIwe unogona zvakare kuwana zvinyorwa pamusoro peprojekti, naizvozvowo ruzivo rwekuti ungaedza sei mashandisiro matsva uye mairi, iwe unogona zvakare kupa ruzivo nezve maficha awakaedza uye asiri pane akanyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » WinApps yave kuwanikwa uye inokutendera iwe kumhanyisa Windows kunyorera paLinux
Yakanaka shit inomhanyisa Windows maapplication paLinux, nzwisisa kuti iwo maviri akasiyana masystem, maviri akasiyana masimboti, mvura nemafuta hazvifi zvichazombosanganisa seimwe.
Ndinotenda munhu wese anogona kuita zvaaida.
Kwakanaka danho, tinotarisira kuti inoenderera mberi nekusimudzira uye kuti ine rutsigiro rwakawanda kupfuura vanoshora ... Kune nguva dzose.
Ini ndainakidzwa kusvika vaisa maApplication achimhanya paVM. Ini ndinoenderera neWine kana kuenda zvakananga kunoshandisa Windows.